Wararkii ugu Dambeeyey Ee Colaadda Deegaanka Taleex Iyo Qabyo Ka Jirta Colaadda Soo Celinta Nabaddii Deegaankaas | Duul News International
Wararkii ugu Dambeeyey Ee Colaadda Deegaanka Taleex Iyo Qabyo Ka Jirta Colaadda Soo Celinta Nabaddii Deegaankaas	(Duulnews)-Wararkii ugu dambeeyey ee Colaadda Deegaanka Taleex ka taagan oo laba beelood u dhaxaysa, ayaa sheegaya inaan wali waan waan rasmi ahi aanay Halkaas ka dhicin, isla-markaana labada dhinac wali si toos ah isu horfadhiyaan.
taleexSheekh Taqille oo kamid ah Culimada Deegaankaas oo VOA-da la Hadlay, ayaa sheegay ciidamo tiro badan oo Somaliland ka socdaa ay Halkaas gaadheen, basle aanay si toos ah Magaalada gudaha ugu gelin, isla-markaana ay Labada Maleeshiyo ee colaaddu dhex taallaa ku sugan yahay Labada Daraf ee Magaalada.
Sheekha oo kamid ah Waxgaradka iyo Culimada doonaya inay arrintaas dejiyaan, ayaa sheegay inaanay ciidamada Somaliland wali wax tallaabo ah oo arrintaas la xidhiidha qaadin, balse kaliya ay degeen Goob Magaalada agteeda ah oo aan sidaas uga fogayn.
Sheekh Taqille waxa uu tilmaamay in dhimashada labada dhinac tahay Shan Qof oo afar kamid ahi ay isku dhinac yihiin, halka midka kalena uu dhinaca kale kasoo jeeda, waana arrin warwarkeeda leh oo keeni karta in isqancintu adkaato.
Laba maalmood kahor ayey ahayd markii colaaddani si rasmi ah u bilaabantay, isla-markaana Hubka Teknikada ah la isu adeegsaday, iyadoo ciidamada Somaliland oo Markaas Halkaas ka fogaa aanay qaadin wax tallaabo ah oo labada Beelood lagu dhexdhexaadinayo.
Magaalada Taleex oo hore xarun ugu ahaan jirtey Kooxda Khaatumo, ayaa mudadii ay gacanta Somaliland ku jirtey ammaan ahayd, waxana ay Masaafo 80-Km ah dhinaca K/ Galbeed kaga toosan tahay Caasimadda Puntland ee Garowe, waxana Halkaas kusii Qulqulaya Duqay iyo Waxgarad ay ka Go’an tahay inay Arrinta Nabad kusoo dabbaalaan.